Madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee Somaliland yeelato oo ka digay dhibaatooyin uu sheegay inay ka dhalan karaan Ururrada-siyaasadeed | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee Somaliland yeelato oo ka digay dhibaatooyin uu...
Madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee Somaliland yeelato oo ka digay dhibaatooyin uu sheegay inay ka dhalan karaan Ururrada-siyaasadeed
Hargeysa-(Berberanews)- Madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee Jamhuuriyadda Somaliland Md. Xasan Ciise Jaamac, ayaa sheegay in Ururrada cusub ee siyaasadda ee dalka lagaga dhawaaqayaa ay horseedi karaan burbur dawladnimo oo gaadha illaa heer qoys-qoys loo furto, isagoo xusay inay habboon tahay in Ururrada yar yar laga tashado sidii meel la isugu geyn lahaa.
Sidoo kale, Xasan Ciise Jaamac waxa uu baaq u diray dadweynaha, isagoo ku dardaaray inay iska hubiyaan ficillada siyaasiga ay dooranayaan. Waxaanu Mujaahid Xasan Ciise sidaa ku sheegay mar uu maanta ka hadlayey Xaflad lagaga dhawaaqay Urur-siyaasadeedka UDHIS oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Xasan oo arrimahaa ka hadlayaana waxa uu yidhi; “Ururro badan oo yar yar ayaa lagu dhawaaqay oo waad ka war haysaan kuwo kalena way soo socdaan, waxaan idin xusuusinayaa hadal aan khayriyada ka idhi dhammaadkii sagaashameedyadii waxaan idhi waagaas nimanyahow wadamada soo koraya, Afrika iyo Carabta saddexdaas ayaa maanta dunida ugu liita inaguna saddexdiiba waynu nahay oo saddexdii koob ee adduunka ugu liitay ayaynu isku darsanay.”
“Hawsha ina sugaysaa walaalayaal ma yara. Ururadan lagu dhawaaqay iyo kuwo soo socdaba waa inaynu meel iskugu geynaa, haddii aynu doonayno inaynu dadka iyo dalka waxtarno, ururo tiradoodu badan tahay oo habar-habartu dan bay ahayde qoys qoys hoose ka muuqdo ina anfici maayaan.” Sidaa ayuu yidhi Xasan Ciise Jaamac.
Waxaanu isaga oo hadalkiisa sii wata intaa ku daray oo uu yidhi; “Waa inaynu ka tashanaa oo meel iskugu geynaa haddii Alle yidhaahdo, waxaan soo jeedinayaa oo aan madaxda UDHIS iyo UCID-ba kala hadlay waxaan doonayaa in labadaasi urur hormuud ka noqdaan sidii ururadan yar yar ee badan waynu ku jabaynaaye’e oo dantii qaranku sidaasi kuma jirto.”
“Soomaalidu waa ta tidhaahda ninkaad kabo ka tolanayso kabihiisa ayaa la eegaa, siyaasiyiinta kabahooda lama eego kabaha ugu quruxda badan ayay kuu soo xidhanayaan, waxa la eegaa ficilkooda oo lagu kala baxayaa oo aad xaqiiqada ka helaysaa dariskii Gumaystihii laga bartay waxay ahayd qeybi oo xukun, waxaan leeyahay siyaasiyiinta qeybi oo xukun waxa gumaystuhu ugu tallogalay inuu inagu naafeeyo laakiin haddii aad tidhaahdo waan qeybinayaa si aan u xukumo ummadaadii jabisay.” Sidaa ayuu yidhi Md. Xasan Ciise Jaamac, oo ahaa Madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee ay Somaliland yeelato markii lagaga dhawaaqay Burco 18-kii May 1991-kii oo ahayd markii ay Somaliland gooni uga goosatay ama madax-bannaanideeda kala soo noqotay dalweynihii la isku odhan jiray Jamhuuriyadda Dimuquraaddiga Soomaaliya.
Previous articleGolaha Wakiillada oo Xeer Xasaasi ah oo horyaallay fasax dheer ka galay
Next articleSOMALILAND OPINION SURVEY-HARGEISA DISTRICT